Nintendo ayaa lagu wadaa in uu faahfaahin cusub oo ku saabsan Console Switch ay. Halkan waxa aan rajeynaya in la ogaado
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Nintendo Switch: waxa aan filaya ka Console cusub” waxaa qoray Stuart Keith, waayo theguardian.com 11-Wednesday January 2017 12.04 UTC
Tani Friday at BST 4am, Nintendo muujin doonaa ay bet weyn on mustaqbalka of warshadaha video ciyaarta - Switch.
Shirkadda dhawaaqday bedelka u bedelay Wii U soo laabtay March 2015, ka dib markii mashiinka in si weyn ku guuldareysteen inay guusha weyn ee ay isku magaca yihiin. Asal iyo dhaleeco NX, in aan marka hore Kulaashaan Switch October ee la soo dhaafay, marka Nintendo tusay fikradda design aan caadi ahayn markii ugu horeysay.
Arkayay nidaam hybrid, Switch waa labada Console guri iyo qalab ciyaaraha la qaadi karo. The dhisay-in 6.2 ", 720p bandhigay macnaheedu waa kulan lagu ciyaari karo meel ka baxsan guriga, iyo technology a multiplayer maxaliga ah ee ka dhignaan doontaa milkiilayaasha awood u yeelan doonaan in ay la kulmaan ilaa iyo wada ciyaari meelkasta oo ay joogaan. Laakiin waxaa soo celiyo qolka aad ku nooshahay iyo rid galay dekedda iyo waxaad sii wadi kartaa in uu ciyaaro adiga oo isticmaaleya isticmaale screen TV.
Laba ilaaliyaal yaqaan Joy-Qasaarooyinka booska labada dhinac ee shaashadda, abuurista caadiga ah ay gacanta ku set-up (la screen ee xarunta, halkii sida 3DS ah), laakiin waxa ay sidoo kale la kubad kartaa oo si gooni gooni ah loo isticmaalo - ama la geeyaa siyaada ah gacanta Joy, oo iyaga xaliyay eg eey cartoon yar frazzled. In dhaqaaqo ah ku dhowaad quaintly yallow, kulan la iibin doonaa on gaariyo halkii saxanno indhaha.
Taasi hadda ay inta badan waxa aan ognahay in, laakiin tani Friday Nintendo ballan inuu u muujiyo ka badan via ay Nintendo Direct adeegga Streaming. Halkan waxa aan filaya:
Taariikhda daayo iyo qiimaha
Dhammaan waxaan leenahay waa taariikhda caddayn March, iyo qiimaha tafaariiqda kara sababihii: Y25,000, ama qiyaastii $ 225 / £ 180 (inkasta oo ay sabab u tahay qiimaha dhoofinta iyo gobolka of pound ah, waxaana ay u badan tahay arko wax ka badan ka dhigan in £ 200 ama xataa £ 250 haddii qiimaha Yen this heysta). Waxaan rabnaa in la ogaado haddii ay jiraan xidhmo kasta oo ka mid ah kulan ama accessories. On mawduuca of dambe, waxa ay u muuqataa aynu ka filan karto xukuma a pro (sida ka mid Wii U, oo waxay bixisaa khariidad la button more caadiga ah), iyo xitaa ul ah Arcade.
Tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan ciyaaraha
Zelda neefta of Wild ah Sawir: PR Company Qormada
Ilaa hadda kaliya sacab muggiis oo horyaal ayaa la xaqiijiyay, la Legend of Zelda: Neefta Wild iyagoo isku aadka waaweyn. teaser A muujiyey October ee la soo dhaafay si maldahan at a Super Mario Bros cusub, a wax Mario kart iyo dekedda macquulka ah ee Skyrim, biimayn ah tallaabo loo amaano ka Beytesda. Dhammaan kuwa u baahan in la xaqiijiyay, ugu yaraan sababtoo ah waxay tahay arooskii dhiigga oo xiiso leh. Sidoo kale, waa maxay qorshaha uu Nintendo leeyihiin in ay adeeg Console Virtual oo ogolaanayaa ciyaartoy download kulan Retro? Waxaa jira hadal taageero GameCube taas oo noqon lahayd suurad wacan. Super Mario Sunshine in HD? Oh ay haa tahay.
Details Technical u soo muuqan doontaa
OK, sidaas Nintendo weligii ku saabsan dhiig technology laayeen, laakiin waxaan ugu yaraan jeclaan lahaa in la ogaado waxa gudaha sanduuqa. Waxaan ognahay waxaa jira chipset Nvidia Tegra ah waxaa (processor a smartphone-xuddun u hufan), laakiin garan mayno kuwaas oo mid ka mid ah. waxaan fili karaa muuqaallada 4 kiiloo mitir marka mashiinka la soo xirtey? Waxaa kale oo aan maqlay in laga yaabaa in awood processing wuxuu soo daadiyaa by 40% marka mashiinka la undocked - taas oo macno u ah nolosha batteriga, laakiin sida ay u saamayn doonto kulan garaaf ahaan hodan? Oo ku xiran nolosha batteriga, ilaa goormaan karaa waxaan rajeyneynaa? Wii U ee GamePad bilaabay masaakiinta ah 3-5 saacadood, iyo in aan la samayn wax ka mid ah shaqada guuxid nidaaminta. Faraha gudbay muddo siddeed saacadood ah.
jawaab An su'aasha: waa daabacayaasha weyn runtii saarnaa?
Wada-hawlgalayaasha Switch Nintendo Sawir: Nintendo
Mar kasta oo la Console cusub Nintendo soo baxa waxaa jira this muddo diblomaasiyadeed xiiso leh marka awoodaha weyn ee warshadaha - Arts Electronic, Ubisoft, Activision, Beytesda, iwm) - Oo dhan ka dhigi wacdiyo jaceyl ku saabsan hardware iyo taageero sintaan Haweejkiinna dhexdooda, waayo,. Markaas qof kasta baaba'aa ka dhaqso badan taariikhda prom teenage, iyo Ubisoft soo bandhigtay horyaalka Just Dance. Markan, waxaa jiray wacdiyo camiridda, oo ay ku jiraan in Skyrim oggayn, laakiin weli - aan aragno hadii aan helno Saamaynta Mass a, Aayahooda ama - ha ha - Read Furashadii Dead 2.
Si aad u ogaato haddii Nintendo ayaa helay internetka?
OK, in waxoogaa cadaalad daro, labada Wii U iyo 3DS bixiyaan adeegyo kala duwan oo xiiso leh multiplayer: StreetPass, Miiverse, eShop, Console Virtual, iyo sidoo kale ka shaqeynayaan multiplayer hoose iyo online. Laakiin via nidaamkooda jirdilay ID Friend Code iyo Nintendo Network, waxay noqon kartaa mid adag si ay u maareeyaan kulan aad digital iyo saaxiibtinimada ciyaaraha, iyo wax kasta oo ku xidhan yahay mashiin gaar ah - duwan haayno in ay 'hal mar soo dejisan waana idinkaa meel kasta oo aad' hab fadilay by badan oo inteeda kale oo ka mid ah macaamiisha qalabka korontada caalamka loo yaqaan. Sidaas beddelo doonaa bixiyaan oo dheeraad ah aan xuduud lahayn, adeegga digital la heli karo iyo dareen? Waxa uu dareensan yahay sida ay tani tahay arrin muhiim ah in qarniga 21aad.
57173	9 Qodobka, Ciyaaraha, Keith Stuart, Nintendo, Nintendo Switch, Technology, UK Technology
← Ma Time in bedelato Mac for Laptop Windows a? Plantronics BackBeat Pro 2 – Review →